कुन बार कुन भगवानको पुजा आजा गर्नाले मनोकाङ्छ्या पुरा हुनुको साथै आटेको पुग्छ ? जानकारी लिनुहोस - सुदूरखबर डटकम
कुन बार कुन भगवानको पुजा आजा गर्नाले मनोकाङ्छ्या पुरा हुनुको साथै आटेको पुग्छ ? जानकारी लिनुहोस
हप्ताको कुन बार कुन-कुन देवी-देवताको पुजा गरिन्छः
सोमबार ‘शिवजी‘को दिन हो। यस दिनमा शिवजीको पुजा-आरधना गरे शिवजी चाँडै नै खुसी हुन्छन्। यस दिनमा शिव मन्दिर गई विशेषतः ‘अर्धनारीश्वर पुजा’ गर्ने अनि ‘ऊँ नमः शिवाय’ मन्त्र जप्नुपर्दछ। अझै सोमबारको दिन शिवजीको पुजा गर्नेबेला शिवपुराण पढ्दा शिवजी प्रसन्न भई मागेको वर दिने विश्वास गरिन्छ।कुमारी स्त्रीले राम्रो वर पाउनका लागि शिवजीको पुजा गर्ने गर्दछन् भने विवाहित स्त्रीले आफ्नो परिवारमा सुखशान्ती र पतिको लामो आयुको लागि शिवजीको पुजा गर्दछन्। यस दिन व्रत बस्दा एक-छाक मात्रा खानुपर्दछ भने खानामा नुन-तेल मिसाउन मनाही छ।